महानगरबासीको स्वास्थ्य प्रति चिन्तित छौं : उपमेयर(अन्तर्वार्ता) - Parichay Network
महानगरबासीको स्वास्थ्य प्रति चिन्तित छौं : उपमेयर(अन्तर्वार्ता)
सन्तोष बस्याल द्वारा	 १६ भाद्र २०७७, मंगलवार १८:०८ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रन्त छ । नेपाल समेत यसबाट अछुतो रहेन । पछिल्लो समय पोखरामा संक्रमितहरु बढीरहेका छन् । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पोखरा महानगरले हालसम्म गरेका गतिविधि, निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता र भावी योजनाका विषयमा पोखरा महानगरपालिका कि उपमेयर एवं कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति कि संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङसँग परिचय नेटवर्ककर्मी सन्तोष बस्यालले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पोखरा महानगरले हालसम्म गरेका गतिविधि के हुन् ?
सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ११ चैत्र २०७६ लकडाउन गर्यो । लकडाउन भएसँगै पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मेरो संयोजकत्वमा एउटा मूल समिति गठन गर्यो । मुल समितिमा वडाहरु ६,१३,१९ र २९ वडाध्यक्ष सदस्यमा हुनुहुन्छ । मुलसमिति गठन भएपछि उपसमिति गठन भयो । जसको संयोजक वडा १९ का वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ । वडा नं ९ को अध्यक्षको संयोजनमा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति गठन भयो । ६ वटा कलस्टरमा खाद्यान्न आपुर्ति तथा व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरेर काम अगाडि बढायौं ।
क्वारेन्टिन र आईसोलेसनको व्यवस्थापन कस्तो छ ?
क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित नै गरेका छौ । महिलामैत्री क्वारेन्टिनको समेत व्यवस्थापन भएको छ । मलाई लाग्छ यस्तो प्रकारको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने पोखरा महानगर मात्र हो । महिलाहरुको लागि ५० बेडको क्वारेन्टिन, लेकसिटी ‘बी’ मा झण्डै एक सय क्षमताको बेड, मालेपाटनको कृषि तालिम केन्द्रमा ४८ बेड क्षमताको पहिलो चरणमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन भयो । संक्रमण बढ्दै जाँदा नपुग्ने देखेपछि हामीले पोखराका ९ वटा विद्यालयमा समेत क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्यौैं । झण्डै ५ सय क्षमताको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न सफल भयौं । पहिले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न सकस थियो अहिले आईसोलेसन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । तर पनि महानगरबासीको स्वास्थ्य प्रति हामी चिन्तित छौं । संक्रमितहरुलाई होम आईसोलेसनमा समेत बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । २५ जना होम आईसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो । जसमा ८ जना निको भएर घर फिर्ता हुनुभएको छ । अहिले हामी आईसोलेसनको निर्माण चरणमै छौं ।
महानगरले विपन्न परिवारका लागि राहतको प्याकेज समेत ल्यायो, राहत वितरण कार्यमा कत्तिको सफल भैयो ?
पोखरा महानगरपालिका र अन्य संघसंस्थाको सहयोगमा महानगरका ३५ देखि ४० हजार विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्यौं । राहत वितरण गर्दा कार्यविधि नै बनाएर वितरण गरेका थियौं । बिचमा केही विवाद समेत आयो । त्यसलाई समेत हामीले सम्बोधन गर्यौं। पोखरा महानगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने ६ सय ८० सुत्केरी महिलाहरुलाई सुत्केरी प्याकेज समेत वितरण गरियो । लकडाउनका बेला यातायाताको सुविधा थिएन । त्यस्तो समयमा डाइलसिसको बिरामी र सुत्केरी महिलाहरुलाई एम्बुलेन्स शुल्क नलिने गरी सेवा प्रवाह ग¥यौं । पोखराका सार्वजनिक स्थलहरुमा डिस्इन्फेक्सन स्प्रे गर्ने काम देखि स्वास्थ्य सुचना प्रवाह गर्ने काम सम्मको गतिविधिलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं ।
क्वारेन्टिन र आईसोलेसनलाई लिएर केही गुनासो हरु समेत सुनियो, यसमा तपाईको धारणा के छ ?
काम गर्दै जाँदा गुनासो आउनु स्वभाविक हो । हामीले विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाउँदा स्थानियबाट विरोध पनि भयो । शव व्यवस्थापनमा समेत अप्ठेरो स्थिति भयो । नबुझेर पनि हुन सक्छ । हामीले उहाँहरुलाई सम्झाई बुझाई गरेपछि क्वारेन्टिनको विषयमा गुनासो सुन्नु परेन । अहिले हामी आईसोलेसन निर्माणको क्रममा छौं । विद्यालयहरुमा क्वारेन्टिन हामीले हटाइसकेका छौ । महानगरले हाल चार ठाउँमा मात्र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेको छ । बुद्ध हस्पिटल, लेकसिटी बी,मालेपाटनको कृषि तालिम केन्द्र र पोखरा २० को सञ्चालनमा नआएको विद्यालयमा क्वारेन्टिन रहेको छ । कृषि तालिम केन्द्रको ४८ बेडको क्वारेन्टिनलाई आईसोलेसनमा परिणत गरिसकेका छौं । जसमा महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै आईसोलेसनको व्यवस्थापन गर्छौं । प्रदेश र महानगरको संयोजनमा महिलाहरुको लागि वडा नं ३३ मा सुरक्षा गृह बनाउँदै थियौ । त्यो अब लगभग पूरा हुने चरणमा छ । ६० देखि ७० बेडको क्षमता रहेको उक्त स्थानमा हाललाई आईसोलेसन राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
कोभिड रोकथामका लागि महानगर र वडाको समन्वय कस्तो छ ?
वास्तवमा भन्ने हो भने वडाहरु भनेकै महानगर हो । पहिला त हामीले क्वारेन्टिन बनाउने बेलामा प्रत्येक वडाले बनाउने कुरा भयो । पछि ठाउँ हेरेर महानगर र वडाकै समन्वयमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन ग¥यौं । आईसोलेसन निर्माणमा समेत वडा र महानगरको समन्वयात्मक भूमिका हुने गरी काम भइरहेको छ । वडाको समन्वय बिना महानगरले काम अगाडि बढाउन सक्दैन ।
कोरोना रोकथामका लागि पोखरामा निषेधाज्ञा समेत गरियो, प्रभावकारिता कस्तो रहयो ?
निषेधाज्ञाको विषयमा धेरै कुराहरु आयो । कोरोना जहाँ बढी चहलपहल छ त्यहाँ देखिने कुरा हो । पहिलो चरणको निषेधाज्ञा गर्दा पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न राजनीतिक दलका टोली सँग बसेर छलफल भयो । त्यति खेर कुशे औंशी, हरितालिका तीज लगायतका पर्व थिए । पर्व मनाउने क्रममा भीडभाड नहोस् र संक्रमण नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले निषेधाज्ञा गर्नुपर्यो । त्यसपछि दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग गरिएको सल्लाहअनुरुप नै भएको हो । निषेधाज्ञा प्रभावकारिता नै रहयो । हामीले जुन सोचका साथ निषेधाज्ञा गरेका थियौ सफल भयौ । अब निषेधाज्ञा थपिदैन । वडामा सक्रिय संक्रमित भएका आधारमा वडाले नै सिल गर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरिएको छ, पूर्ण रुपमा खुल्ने अवस्था नभएर नै हो ?
दुई चरणको निषेधाज्ञा पश्चात महानगरको बैठक बस्यो । बैठकले निषेधाज्ञा मात्रै समस्याको समाधान होइन भन्ने निचोड निकाल्यो । महानगरका वडाहरुमा पनि अत्यावश्यक कामहरुको सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । बजारमा सबै पसलहरु खुल्न पाएका छैनन् । खोल्न दिने हालको अवस्था पनि छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय अहिलेलाई स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्य रहे नै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले, भदौ २० गते सम्मका लागि सामान्य खुकुलो मात्र गरिएको छ । आवतजावत समेत केही कम भइरहेको छ । विस्तारै भीडभाड कम गर्दै लयमा फर्किने हाम्रो योजना छ ।
कोभिड रोकथामका लागि महानगरको आगामी योजना के छ ?
महानगरबासीलाई थप सुसुचित गराउँदै भीडभाड कम गर्ने र संक्रमण फैलन नदिने महानगरको आगामी योजना हो । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी परीक्षण दायरा बढाउँदै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामै हामी खटिएका छौं । कोरोना भाइरसका कारण परिस्थिति कस्तो बन्छ त्यहि अनुरुप हामी लाग्छौं । हाललाई आम महानगरबासीलाई सुरक्षित र जिम्मेबार बन्न मेरो आग्रह हो ।